मन्त्री हुनु भनेको श्री ३ महाराज हुनु हो ?
कुन मन्त्रीसँग कति गाडी छन् ?
मन्त्री हुनु भनेको श्री ३ महाराज हुनुजस्तो पो भयो, संघीय शासनमा । मन्त्री नै श्री ३ भएपछि कर्मचारी हजुरीया जर्नेल हुने नै भए । अनि फर्मानमा चल्ने भयो शासन प्रशासन । बिधि बिधान सोझालाई देखाउने र तर्साउने काँडे कोर्रामा सिमित हुनपुगेको छ ।
मन्त्री हुनासाथ घरमा गाडीको लाइन राख्नुपर्ने । श्रीमती, छोराछोरी, नातेदारसम्मलाई सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नुपर्ने किन ? मन्त्रीलाई करोडौ पर्ने गाडी किन चाहिने ? अन्यत्र देशमा प्रधानमन्त्रीसमेत साइकलमा चड्छन्, घरमा आफै रङ्रोगन गर्छन्, जनतासँग अन्तरक्रिया गर्दै सहभागिता जनाउँछन्, नेपालमा मन्त्री भनेका भगवानजसरी हिड्छन्, सुरक्षाको लस्करमा कुद्छन्, आखिर राष्ट्रिय स्रोतको यतिबिघ्न दोहन र दुरुपयोग किन भइरहेको छ ?
मन्त्रीले पदीय मर्यादा र स्रोतको दुरुपयोग गरेपछि सचिव र मातहतका कर्मचारीले पनि गर्ने नै भए । मन्त्री नै अनियमित काममा लाग्ने भएपछि मातहतका कर्मचारी बर्गले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने नै भए । भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण नै मन्त्रीले गर्ने पदीय अधिकारको अधिकारको दुरुपयोग हो ।
गतवर्ष ३ तहको सरकारले ९ अर्व ४२ करोडको गाडी किनेछन् । यो आँकडा आफैमा आश्चर्यजनक हो । गरीव मुलुक, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देखेको सरकार, गाडीमै यो लङ्गडा सोख ? बिलासिताले हद नाघ्यो । जनताको थाप्लोमा ऋणको भार बोकाएर शासक र प्रशासक दिनदिनै सम्भ्रान्त बन्दै गएका छन् । यो सबै भ्रष्टाचारमाथि लगाम नकस्नाले हो । जबदेखि अख्तियार प्रधानमन्त्रीको हनुमानजस्तो हुनगयो, त्यो बेलादेखि खरदार, सुब्बा बाहेक कसैमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । जे जति भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्छ, कमजोर प्रमाणका कारण ती छुट्छन् । यसको अर्थ सेटिङमा र राजनीतिक दबाब र प्रभावमा संविधानमाथि खेलबाड भइरहेको छ । सुशासन कौवालाई बेलपाके जस्तो हुनपुगेको छ । मन्त्री अगुवा हुनुपर्ने, बाटो फोहर गर्ने...पो बन्नपुगे ।